NVIDIA dia nanambara ny fanafoanana ny programa mpiara-miasa aminy | Vaovao momba ny gadget
Eder Esteban | | General, About us
Ny programa GeForce Parter Program (GPP) izay nambaran'ny NVIDIA dia niatrika fihemorana mafy tamin'ny faran'ny volana martsa. Hatramin'ny tatitry ny fanadihadiana dia nilaza fa tsy ara-dalàna sy mifaninana amin'ny fifaninanana ity maodely ity. Zavatra iray izay nahatonga loharanom-baovao marobe no manomboka manadihady momba azy io ary mampametra-panontaniana ny amin'ny fahaizan'ity hetsika ataon'ny orinasa ity. Tsy mijanona ny tsikera amin'izao fotoana izao.
Hatramin'ny tetikadin'ny NVIDIA dia nofaritan'ny maro ho mampatahotra ny maro. Hatramin'ny alàlan'ity programa ity dia nankafizin'ny orinasa ny mpanamboatra sasany. Ho valin'izay, izy ireo dia niandraikitra ny famandrihana fianakaviana vokatra sasany ho azy ireo fotsiny. Na dia hifarana aza ity.
Satria nanambara ihany ny NVIDIA tamin'ny farany fa hanafoana ity programa ity izy ireo. Noho izany dia afaka miaina milamina ny sehatra aorian'ity fanambarana nataon'ny orinasa ity. Satria mbola tsy mijanona ny tsikera amin'izao fotoana izao. Ka mety nahatsapa ny fanerena ilay orinasa.
Miaraka amin'ity programa mpiara-miasa tadiavin'ny orinasa ity Ny vokatrao dia hampifandraisina amin'ny fianakavian'ny vokatra mpamokatra sary, toa ny MSI. Amin'izany fomba izany, ny sasany amin'ireo laharana MSI dia natokana ho an'ny sary NVIDIA fotsiny. Arak'izany, ny AMD dia tsy afaka nampiditra tandavan-javatra toy izany tamin'ny vokariny. Ka hanakana ny fivoaran'ny AMD eo amin'ny tsena.
Nilaza ny orinasa fa nofoanan'izy ireo ilay seho hampitsaharana ny lainga sy tsaho mipoitra manodidina izany ihany tato anatin'ny herinandro lasa. Na dia tsy naniry ny hanome antsipiriany bebe kokoa momba izany aza izy ireo. Fa azo antoka fa misy antony iray hafa nanafoanana ny tetikasa manontolo.
Azo inoana fa nisy zavatra tsy maintsy natao ny fahasimban'ny sary naterak'ity tetikasa ity tamin'ny NVIDIA. Satria maro ny mpitsikera amin'izao fotoana izao, maro amin'ireo sehatra. Ka ny sary sy ny lazan'ilay orinasa dia tsy niaina tamin'ny fotoana mety indrindra. Dingana iray mankany amin'ny lalana tsara ny fanafoanana ny tetikasa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » Ny NVIDIA dia manafoana ny programa mpiara-miasa mampiady hevitra
Disney dia mandray ny virtoaly dingana iray lavitra miaraka amin'ity palitao mahatalanjona ity